Shuruudaha & Shuruudaha | ThatsLuck.com
Adeegsiga softiweerka laga soo dejiyey goobta ThatsLuck.com waxay tusineysaa aqbalida shuruud la’aan ee soo socda Shuruudaha iyo shuruudaha, oo adeegsaduhu caddeeyo inuu akhriyay, fahmay oo si buuxda u aqbalay.
1 XUQUUQDA - SOFTWARE ayaa ka socda ThatsLuck.com waxaa ilaaliya shuruucda xuquuqda daabacaadda iyo xuquuqda daabacaadda ee ka jirta Talyaaniga, qodobbada heshiisyada caalamiga ah iyo dhammaan sharciyada kale ee khuseeya.
Sidaa awgeed, isticmaalaha waxaa waajib ku ah inuu ula dhaqmo softiweerka sida waxyaabaha kale ee xuquuqda daabacan (sida buug ama DVD disc). Isticmaaluhu ma, soo saari karo, kumbuyuutar kumbuyuutar kumbuyuutarka softiweerka iyadoon oggolaansho qoraal hore laga haysan ThatsLuck.com
2 XUQUUQDA ISTICMAALKA - ThatsLuck.com wuxuu siinayaa qofka isticmaala inuu si ku meel gaar ah ugu isticmaalo softiweerka adeegiisa gaarka ah.
Barnaamijka waxaa la fahamsan yahay inuu yahay "mid la isticmaalayo" marka loo adeegsanayo kombiyuutar, kiniin, taleefan casri ah ama aalad kale oo ku habboon. Isticmaaluhu wuu ka warqaba oo aqbalayaa taas ThatsLuck.com laga yaabaa inay wakhti kasta joojiso isticmaalka softiweerka si joogto ah ogeysiis la'aan.
3 XUDUUDDA ISTICMAALKA SOFTWARE - Isticmaaluhu sinnaba ugama beddeli karo shaqeynta barnaamijka.
Isticmaalka softiweerka la soo dejiyey macnaheedu maahan inuu toos u xaq u leeyahay isticmaalka wixii cusbooneysiin ah ama noocyo dambe ah.
4 KA SAARIDDA MASUULIYADDA DHIBAATOOYINKA - Si kastaba ha noqotee maamulka goobta ThatsLuck.com waxay masuul ka noqon doontaa waxyeelada tooska ah ama aan tooska ahayn (oo ay ku jiraan, xad la'aan, waxyeelada luminta ama luminta dakhliga, carqaladeynta ganacsiga, luminta macluumaadka ama qasaaraha dhaqaale ee kale) ee ka dhasha isticmaalka ama aan loo isticmaalin barnaamijka, xitaa haddii loo gudbiyo maamulaha goobta ThatsLuck.com ayaa lagula taliyay suurtagalnimada waxyeelada noocaas ah.
Mas'uuliyadu waxay saaran tahay gebi ahaanba iyo gaar ahaan isticmaalaha. Isticmaaluhu wuxuu diidayaa ilaa imika si uu u dalbado magdhow wixii waxyeelo ah, toos ah ama aan toos ahayn nooc kasta oo ka timaadda isticmaalka ama isticmaalka software-ka laga soo dejiyey websaydhka ThatsLuck.com Wax kasta oo aan halkan lagu bixin ama lagu soo sheegin, tixraac ayaa loo samaynayaa Xeerka Madaniga ah ee Talyaaniga.
4893 XNUMX Soo degsasho